Critic » ကျွန်မ ရှေ့နေ – for Agile (just stay focused on the objective)	36
မဟုတ်ဘဲ “ဒါကို ချက်ရင် စပ်မှာ” လို့ ရမ်းတီး လိုက်မိလို့ အစပ်ကြောက် တဲ့ သူ တွေ က မထွက်တော့ဘဲ အပေါက်ဝ မှာ ကန့်လန့်ကြီး ပိတ်နေမှဖြင့် ……….. PS- ရန်စွာခြင်း မဟုတ်ပါ။
@QUIL@ says: အဂျိုင်လ်းက ဗာဂျင် ဆို???
မြစပဲရိုး says: agile
@QUIL@ says: အဂျိုင်းလ် မှာ အဂျိုင်းလ် ကိုယ်တိုင် ပျော်ဝင်နေတဲ့
မြစပဲရိုး says: http://www.agilemanifesto.org/
@QUIL@ says: ခု စက်ကျူရေးရှင်းက အဂျိုင်းလ်မှမဟုတ်ဘဲ
မြစပဲရိုး says: Jimmy Lashio
kai says: နားလည်ထားသလောက်ကတော့.. သမ္မတကို.. လူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်တာမဟုတ်..။
ခင်ဗျားညီမကို.. စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်.. ခင်ဗျားမှာ.. အရှိဆုံးပါလို့..။ period. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သူက ဒီချုပ် က ဘယ်သူ့ ကို ရွေးမှာလဲ ဆိုတာ အတင်းကြီး ကိုဘဲသိချင် နေဟန်တူတယ်။
kai says: လွှတ်တော် ၁ရပ်စီက.. ၅၀% +၁ယောက် သဘောတူမျှတဲ့အုပ်စုကြီးကသာ.. ဒုတိယသမ္မတ တယောက်စီတင်ပေးနိုင်မှာမို့… ဒုသမ္မတရွေးတာမှာ.. ပါတီအလံတခုတည်းအောက်က.. အမတ်တွေဖြစ်နေဖို့.. တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်..။
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်ညိုညိုသင်း တစ်ယောက် ကိုဘဲ ကြိုက်တာပါ။ ကျန်သူများ ကို မကြိုက်ပါ။
ဒေါ်ခင်မမမျိုးကိုယ်တိုင်လာရှင်းရင်.. ကောင်းမယ်…။ =
အသက်တန်းဟူသည်.. လူကိုမစောင့်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အခုလဲ အဲဒီလို နိုင်ငံ အတွင်း/အပြင် က ချွန်တွန်း နေတာဘဲ မဟုတ်လား သူကြီးရယ်။
kai says: အဲဒီတုံးက.. အဘဦးဝင်းတင်တယောက်ထဲက.. “အတွက်”မှားသွားတယ်လို့.. ပြောချင်မိတယ်…။
ကွိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဇီဇီ ရေ ဒီမှာ ချွန်တွန်း မိပြီ ဟေ့။ ဘယ်တော့ ဆွဲချ မယ်မသိ။ lol:-)))))))))))))))))))
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများက
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောချင်တာတော့ အများကြီးးပဲ
ှိသေးးလို့..! ဒီ အချိန်က ထူမယ့်လက် ကို ကမ်းးပေးးရမယ့် အချိန် ဖြစ်နေရမှာာာ
ဆေးးရင်လည်းး dettol ဆပ်ပြာနဲ့မှ တို့ ဘာတို့ အတွက် အချိန်ပေးးနေရမယ်ဆို ရင် တန်မတန် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြန်မေးးလိုက်ပြီ… ဒီခရီးး လာချင်ရင် အနီးးလေးးပါ အရီးးး
မလာချင်လို့ ကွေ့နေတာတွေ အတွက် ပြောရတာ မောပါတယ်… ကိုယ်တွေ အတွက် အလုပ်လုပ်နေတယ် လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ အမေအို အတွက် ဒီ ၂ လ ပဲ အစွမ်းကုန် အားးထုတ်ပါမယ်…. တစ်ခုပြီးးတစ်ခု အပြစ်ပြောတာတွေ ထိ ကျနော် မနာတော့ပါဘူးးး
မြန်မာလူမျိုးးနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရေးးကို ဒီ ဝေဖန်လေကန်တွေေ ထက် စု က ပို သိပါတယ်… နောက်ဆုံးး မအောင်မြင်ဘူးးဆိုရင်တောင် တရားးမျှတတယ် ယုံတဲ့ ဘက် က
NLD ပါတီဟာ အားးမကိုးးထိုက်ဘူးးဆိုတာ ကို ဇွတ်ဆွဲယူနေကြတာပါ.. သူတို့ အတွက် စု မလိုပေမယ့်
နောက်ဆုံးးအခြေအနေရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံသားးတွေ အတွက် စု ကို အလို အပ်ဆုံးးပါ.. ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျနော့် အတွက်တောင် စု နဲ့ ဒီမို မလို အပ်ပေမယ့် ကျနော့် အမျိုးးထဲက နောက်မျိုးးဆက်တွေ အတွက် စု ကို လိုအပ်ပါတယ်..
Mike says: Aye Nyein
NLD ကိုသာမဲပေးကြရန်နှင့် မိမိနှင့်နီးစပ်သူအားလုံးကိုလည်း NLD ကိုသာ မဲပေးကြရန် မဲဆွယ်ကြပါမည့်အကြောင်း တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ရပါကြောင်း။ https://www.facebook.com/aye.nyein.758/posts/935827793151375
ကထူးဆန်း says: အရီးရေ .. ၂၀၁၅ မှာ ဒါတွေ ရင်ဆိုင် ရမယ်ဆိုတာ သိသိချည်းပါ .. ဖရိုဖရဲ ယိုယွဲ နေတဲ့ နေရာပြင်ဖို့ဆိုတာ အာဏာ ရမှ ဘယ်လို လုပ်မှာပါ ဆိုပြီးတော့ ဆိုတာ အား မရဖြစ်လို့ မရဘူးလား ..
ပါးစပ်ပိတ် နိုင်အောင် ကြိုးစား ၍ နေတော့မည် … ကိုယ့် အကျင့် အရင်ပြောင်းမှ … မေးခွန်းမထုတ်မိအောင် နေမှ …. မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေမှ .. ဒီမိုကရေစီ သမားများကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်မရ … အဲ ပြောမိပြန်ပြီ ……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
လက်ငါးချောင်းနဲ့.. ၁ခါ… ၂ခါ..၃ခါ..၄ခါ…၅ခါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရေးထဲ သူ့ ခွင် ထဲ ခေါ်နေပြန်ပါပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: လော်ဘီမြက စစ်ထောက်လှမ်းရေး မြှုပ်ထားတဲ့ သူ့လူကိုယ့်ဖက်သားဂျီးလား သိဝူးနော်…။ သုဗံစာရင်း စစ်ကြည့်ရင် သိမှာပဲစ်…
မြစပဲရိုး says: မြန်မာပြည်ထဲ တကယ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနိုင်ပြီလား။ တကယ် မှမဖြစ်သေးတာအားလုံး အသိပါ။
မြစပဲရိုး says: လူတန်းစား လဲ မညီတော့ ဘဲ အကွာကြီး ကွာနေတာ မမေ့ကြပါနဲ့။
ဒီမိန်းမကြီး လဲ အာဏာရှင်ဆန်တယ် ပြောနေတာတွေ ကို လဲ နားမလည်ဘူး။ . ပြောခဲ့ပြီးပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: သူတို့ လုပ်တုံးကတော့ လှုပ်ခြင်လျှာလှုပ်ပီး လိုမှ ညှီညွှတ်ရေးတဲ့.. ယမယ် အားကျီး… ။
မြစပဲရိုး says: ဒီ စစ်အစိုးရ ကို ကြောက်အောင် လုပ်နိုင်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲ ကြောင်ကြောင် ရယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: လုကံ ဝကံ ပေါ့ဂျာ….။ လောကမှာ တခုလိုခြင် တခုပျံပေးရတာ ချည်းပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ အထှာရှိတယ်။ ကိုယ့်ဖက်က အထှာမထားလျင် သူ့ဖက်ကလည်း အထှာပျံမျှော်မနေနဲ့…။ လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့သာ ဖြေဖို့ပြင်…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟွာနဲ့ တူတယ်နော်။
အောင် မိုးသူ says: မဲစာရင်းစစ်ကြပါ မှားရင်လည်းပြင်ကြပါနော်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးလေ၊
pooch says: အရီးပြောတဲ့ဆောင်းပါး ကိုဖတ်ကြည့်ချင်လို့ မဖတ်ရသေးဘူး လင့်လေးရှိရင်ပေးပါအုန်း
မြစပဲရိုး says: http://www.nytimes.com/2015/08/29/world/asia/myanmar-democracy-icon-finds-herself-assailed-as-authoritarian.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&_r=0
pooch says: Thank you A Yee :-)
pooch says: your comment is so sharp A yee…. nice shoot ;p
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to Arr Man
F-scale ဆိုတာရှိတယ်။ F-scale က လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ‘ဖက်ဆစ်ဝါဒဆီ တိမ်းညွတ်နိုင်ချေ’ (Fascist Potential) ကို တိုင်းတာတဲ့ စကေးသတ်မှတ်ချက်လို့ ဆိုပါစို့။ ၁၉၅ဝ လောက်တုန်းက နီယိုမာ့က်စ်ဝါဒီ သီအိုဒေါအဒေါ်နိုနဲ့ အခြားစိတ်ခွဲပညာရှင်တွေက လူတွေဟာ အာဏာရှင်ဝါဒဆီ တိမ်းညွတ်ဖို့ ဖြစ်တန်ချေဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းမှု၊ မိသားစုဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ကမ္ဘာ့အမြင် စတဲ့ နောက်ခံတွေကို အင်တာဗျူးပြီး လေ့လာချက်ထုတ်တာ။ နောက်ဆုံး F-scale လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ ၉ ချက် ထုတ်ပေးတယ်။ နံပါတ် ၁ နေရာမှာ အစွဲအယူပြင်းထန်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒ(Conventionalism) လာတယ်။ နံပါတ် ၂ မှာ ပိုင်းခြားဝေဖန်မှုကင်းမဲ့တဲ့ အာဏာနာခံလိုက်လျောမှု (Authoritarian Submission) ကို ပြောတယ်။
တစ်နေ့ငါးထောင်ပေးလို့ အပ်တိုတောင်မပါတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေကို ရိုက်တာမျိုးပေါ့။ နံပါတ် ၃ က အခွင့်အာဏာဆန်ဆန်ရန်စောင်မှု (Authoritarian Aggression)။
ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျလို့ လူတစ်ယောက် သေတာမှာ တာဝန်ရှိသူ/ဝာာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အစား အတိတ်ဘဝက ကံပါလို့တို့၊ ဖြစ်ဖို့ကံပါလို့တို့ စတာတွေနဲ့ လူသေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အယူသီးတဲ့ကောက်ချက်ဆွဲမှုမျိုးလုပ်တာ။ နံပါတ် ၇ ကတော့ အဖျက်သဘောနှင့် အပြစ်မြင်မှု (Destructiveness and Cynicism)။ နိုင်ငံရေးအာရုံလွှဲချင်တိုင်း ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီး ပေါ်ပေါ်လာတာ အကောင်းဆုံးသာဓက။ နံပါတ် ၉ မှာ လိင်မှုရေးရာ (Sex) လာတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၉ချက်လုံးက ဒီမှာ။